उद्योग र सल्लाह द्वारा वेबसाइट बाउन्स दरहरू
उद्योग वेबसाइट बाउन्स दर र सल्लाह
बिहीबार, सेप्टेम्बर 1, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
म कहिले पनि एक प्रयोग को एक विशाल प्रशंसक भएको छैन उछाल दर तपाइँको साइट को समग्र प्रदर्शन को एक प्रमुख प्रदर्शन सूचक को रूप मा। बाउन्स दर एक व्यवसाय देखि अर्को आफ्नो खोज इञ्जिन अनुकूलन र र्याकिंगमा आधारित फरक फरक हुन सक्छ। यदि तपाईं प्रासंगिक सर्तहरूको लागि श्रेणीकरण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग कम बाउन्स रेट हुनेछ। यदि तपाईं केहि अप्रासंगिकको लागि दर्जा दिनुहुन्छ भने, तपाईंको बाउन्स रेट स्काइरोकेट गर्न सक्दछ।
हाम्रो एजेन्सी एक पटक एक अनलाइन प्रकाशकसँग काम गरे जसले विज्ञापनको साथ आफ्नो सबै पैसा कमायो र उनी आफ्नो बाउन्स दरको बारेमा चिन्तित थिए। जे होस्, बाउन्सको मतलब अक्सर विज्ञापनमा क्लिक गरिरहेको थियो। उच्च बाउन्स रेटहरू राख्नु नै उसको सब भन्दा राम्रो ब्याज हो ... त्यसरी उसले पैसा कमायो। त्यसैले हामीले उसको बाह्य लिंक क्लिकहरू मापन गर्न तर्क लागू गर्‍यौं र यसलाई पुष्टि गर्‍यौं!
यदि तपाईं वेबमा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ र गुगल विश्लेषक तपाईंको वेबसाइटको लागि सेटअप छ भने, यस्तो धेरै सम्भावना हुन्छ कि तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइटको लागि बाउन्स दर थाहा छ। तर, के तपाइँ यसलाई केहि हिसाब गर्नुहुन्छ, के बारे मा केहि थाहा छ, तपाइँको उद्योग को औसत बाउन्स दर के हो वा के कारणहरु को लागी तपाइँको बाउन्स दर लाई असर गर्छ? हामीले सुनेका सामान्य प्रश्नहरूबाट प्रेरणा पाएर, यो इन्फोग्राफिक भनेको तपाईंलाई जवाफ दिन र केही सुझावहरू दिन तपाईंको उछाल दर सुधार्नको लागि हो। बाट Kissmetrics.
कसरी फेसबुक मा EdgeRank सुधार गर्न
तपाईको साइटसँग your मिनेटमा च्याट एकीकृत गर्नुहोस्